Back-to-သို့ပြန်သွားရန်အဆိုပါမာစတာ၏ Winners: သာလျှင်3Done ဖူး
နစ်ခ် Faldo (လက်ဝဲ) နှင့်က Tiger Woods နှစ်ဆက်တိုက်အတွက်မာစတာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်သူသုံးဂေါက်သီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဂျေမီ Squire / Getty Images
အနိုင်ရတဲ့ အဆိုပါမာစတာ ပြန်-to-ပြန်နှစ်များတွင်ထက်အလွန်ရှားပါးတဲ့ feat ဖြစ်ပါတယ် အဓိကကာလအတွင်းနှစ်ဆရွှေလင်းတအောင် ။ 2015 တဆင့်ရှိလေးခဲ့ နှစ်ဆရွှေလင်းတ မာစတာသမိုင်းအတွက်, ဒါပေမယ့်သုံးဦးသာပြန်-to-ပြန်ချန်ပီယံ။
ထိုအမှာအနိုင်ရပါတယ်သူကိုဂေါက်သီး၏တိုတောင်းသောစာရင်းကို သြဂတ်အမျိုးသား နှစ်ဆက်တိုက်အတွက်မပါဝင်ပါဘူး အာနိုး Palmer က ။ သို့မဟုတ် ဂယ်ရီ Player ကို ။ ကိုမ ဆမ် Snead မဟုတ်သလို ဘင် Hogan ကြောင့်နိုင်ခဲ့သည်။
သင်သိသကဲ့သို့, မာစတာဆုရှင်ရှေ့တစ်နှစ်ရဲ့ Champ အားဖြင့်အစိမ်းရောင် Jacket သို့ကူညီပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့တစ်ထပ်ဆုရှင်နှင့်အတူစိမ်းလန်း Jacket အခမ်းအနားအတွက်ဖြစ်သွားမလဲ Nicklaus ပထမဦးဆုံးအပြုသည့်အခါမျှမထုံးတမ်းစဉ်လာရှိ၏။ သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်အပေါ်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုတင်ထားရမည်။ သူတို့တစ်တွေအတန်းအတွက်သူတို့ရဲ့ဒုတိယအနိုင်ရသည့်အခါဒါပေမယ့်သြဂတ်စအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌသူတို့ရဲ့အကျီသို့ Faldo နှင့်ဝုဒ်ကူညီပေးခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမဂေါက်သီးအစဉ်အဆက်အဆိုပါမာစတာတန်းသုံးနှစ်အနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်လည်းဤသုံးပါးကိုပြန်-to-ပြန် Champs ဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိအမှတ်3အဘို့ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါဖြစ်ပျက်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
ဂျက် Nicklaus, 1965-66
ဂျက် Nicklaus 1966 မာစတာသောအဓိက၌သူ၏ဒုတိယဆက်တိုက်အနိုင်ရနေစဉ်အတွင်း။ Bettman / Getty Images
အဆိုပါမာစတာပထမဦးဆုံး 1934 ခုနှစ်မှာကစားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဂျက် Nicklaus ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဦးဆုံး back-to-ပြန်ဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့ရှေ့မှာ 1965-66 သည်အထိယူခဲ့ပါတယ်။
1965 မာစတာ: Nicklaus 271 ၏ 72-အပေါက်ပြိုင်ပွဲအမှတ်ပေးစံချိန်သတ်မှတ်ထားနှင့်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါကိုးရိုက်ချက်များအားဖြင့်အပြေးသမား-up, အာနိုး Palmer ကနှင့်ဂယ်ရီ Player ကိုရိုက်တယ်။ ဤသည်သတိပေးခံရသောအနိုင်ရရှိဖြစ်ပါတယ် Bobby ဂျုံးစ် Nicklaus ကစားကြောင်းပြော "ကျွန်မအကျွမ်းတဝင်မထားတဲ့အတူနေတဲ့ဂိမ်း။ "
1966 မာစတာ: ဒါဟာဒီအချိန်အများကြီးပိုနီးစပ်ခဲ့တာ - Nicklaus သူ၏ဒုတိယဆက်တိုက်မာစတာခေါင်းစဉ်တောင်းဆိုဖို့ 18-ပေါက် PLAYOFF လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ Tommy Jacobs နဲ့ရိုက်နှက် ဂေးဘရူ ကြောင်း PLAYOFF ၌တည်၏။
အဘယ်အရာကို 1967 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်: Nicklaus အဘို့ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုမျှ။ သူက 72-79 သေနတ်နှင့်ဖြတ်လွဲချော်။
Nicklaus နီးပါးနှစ်ခု-fer အစောပိုင်းကအောင်မြင်။ သူသည် 1963 ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရပြီးတော့ 1964 ခုနှစ်ဒုတိယအဘို့အချည်ထားသောသို့သော်ထိုသို့အနီးကပ်မဟုတ်ခဲ့: Nicklaus 1964 ခုနှစ်ဆုရှင်အာနိုး Palmer ကနောက်ကွယ်မှခြောက်လပြီးဆုံး။
1963 ခုနှစ်, 1965 ခုနှစ်နှင့် 1966 အပြင်, Nicklaus ကိုလည်း 1972, 1975 နှင့် 1986 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါမာစတာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
နစ်ခ် Faldo, 1989-90
နစ်ခ် Faldo 1990 မာစတာအတွက်ရေမွန် Floyd (လက်ဝဲ) ကျော်ကသူ့ PLAYOFF အနိုင်ရရှိအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ ဒါဝိဒ်သည် Cannon / Getty Images
ဆက်တိုက်မာစတာဘှဲ့အနိုင်ရဒုတိယဂေါက်သီးနစ်ခ် Faldo ဖြစ်ခဲ့သည်။
1989 မာစတာ : Faldo ပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့ အစိမ်းရောင် Jacket ဖြစ်သူ Scott Hoch ကျော်ရုတ်တရက်သေခံခြင်း PLAYOFF အနိုင်ရရှိအတူ။ Hoch ကအနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် 2-ခြေလျင်ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်လွဲချော်ခဲ့ကြသင့်ပါတယ်။
1990 မာစတာ: Faldo က back-to-ကျောကျော-to-ပြန် PLAYOFF နှင့်အတူအနိုင်ရရှိစေခဲ့သည်။ ဤအချိန်, Faldo ရိုက်နှက် Raymond Floyd အဆိုပါ PLAYOFF ၌တည်၏။
အဘယ်အရာကို 1991 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်: Faldo ခေါင်းဆောင်များကြောက်လန်, ဒါပေမယ့်အလွန်ဂုဏ်သရေရှိ 12th ပြီးဆုံးခဲ့ပေ။
Faldo 1996 ခုနှစ်တွင်တတိယမာစတာပန်းဦးရစ်သရဖူကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
က Tiger Woods 2001-02
2001 အန်ဒီလီယွန်အတွက်က Tiger Woods
က Tiger Woods ကသူ၏အံ့သြဖွယ်အစောပိုင်း 2000 ဖျော်ဖြေပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျော-to-ပြန်မာစတာချန်ပီယံကလပ်၏တတိယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
2001 မာစတာ : ဝုဒ်ကျော်နှစ်ခုအားဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ သည်ဒါဝိဒ် Duval , ဤသည် "ကျား Slam" (တစ်ပြိုင်နက်အားလုံးလေးယောက်အဓိကခေါင်းစဉ်ကိုင်ဆောင်) ရက်တွင် capper ဖြစ်ခဲ့သည်။
2002 မာစတာ : ဒီအချိန်ကဦးဆောင်သူသည်သူ့ကိုထပစ်ခတ်တဲ့ Third-ပတ်ပတ်လည် 66 ၏အစွမ်းသတ္တိအပေါ်, ဝုဒ်များအတွက် 3-လေဖြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုအတွက်ဖြစ်ပျက် 2003 : သုံးသစ်ဆွေးဘို့ Going, ဝုဒ်ဦးဆောင်ချွတ်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်လေးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက 75 သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနှင့် 15 အဘို့အချည်ထားလေ၏။
ဝုဒ်ယခင်က 1997 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါမာစတာအနိုင်ရနှင့် 2005 ခုနှစ်နောက်တဖန်အနိုင်ရခဲ့သည်။
ပိတ်လာသော Plus အားတစ်ဦးအနည်းငယ်
1961 ခုနှစ်တွင်အာနိုး Palmer က (လက်ဝဲ) နှင့်ဂယ်ရီ Player ကိုသူတို့ကအဆိုပါမာစတာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျော-to-နောက်ကျောကိုအနိုင်ပေးငြင်းပယ်အလှည့်ကိုယူ။ Bettman / Getty Images
အနိုင်ရရှိမှုပြီးနောက်ပြီးဆုံး 2nd တစ်နှစ်တာ
ဘင် Hogan: 1953 ခုနှစ်တွင် Won, 1954 ခုနှစ်တွင်ဒုတိယ
Doug Ford ကား: 1957 ခုနှစ် Won, 1958 တွင်ဒုတိယ
အာနိုး Palmer က: ဒုတိယ 1961 ခုနှစ် 1960 ခုနှစ် Won,
ဂယ်ရီကစားသမား: ဒုတိယ 1962 ခုနှစ် 1961 ခုနှစ် Won,
ဂျက် Nicklaus: ဒုတိယ 1964 ခုနှစ် 1963 ခုနှစ် Won,
အာနိုး Palmer က: ဒုတိယ 1965 ခုနှစ်တွင် 1964 ခုနှစ် Won,
တွမ် Watson : 1977 ခုနှစ်မှာ Won, 1978 ခုနှစ်တွင်ဒုတိယ
ယော်ဒန်မြစ် Spieth : ဒုတိယ 2016 ခုနှစ် 2015 ခုနှစ် Won,
Palmer က 1961 ခုနှစ် 1-shot ခဲတွေနဲ့နောက်ဆုံးအပေါက်ရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့်ဂယ်ရီ Player ကိုနောက်ကွယ်မှဒုတိယနေရာသို့ drop ဖို့ကို double-bogeyed ။
Palmer ကတစ်စက္ကန့်ဆက်တိုက်မာစတာအနိုင်ရ Player ကိုငြင်းပယ်ရန် PLAYOFF အတွက်တောင်အာဖရိကရိုက်နှက်သျောကျော 1962 ခုနှစ်က Player ကိုရတယ်။
အနိုင်ရရှိမှုပြီးနောက်ပြီးဆုံး 3rd တစ်နှစ်တာ
မျိုးဗီဇ Sarazen : 1935 ခုနှစ်တွင် Won, 1936 ခုနှစ်တတိယ
ဆမ် Snead: 1949 အတွက်ဝမ် 1950 ခုနှစ်တတိယ
ဆမ် Snead: 1954 အတွက်ဝမ် 1955 ခုနှစ်တတိယ
cari Middlecoff: 1955 အတွက်ဝမ် 1956 ခုနှစ်တတိယ
အာနိုး Palmer က: 1959 ခုနှစ်တတိယ 1958 ခုနှစ်တွင် Won,
ဂျက် Nicklaus: 1973 ခုနှစ်တွင်တတိယ 1972 ခုနှစ်တွင် Won,
ဂျက် Nicklaus: 1976 ခုနှစ်တတိယ 1975 ခုနှစ်တွင် Won,
က Tiger Woods: 2005 ခုနှစ် Won က 2006 ခုနှစ်တွင်တတိယ
1931 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား: အမေရိကန်နိုင်ငံ 9, ဂရိတ်ဗြိတိန် 3
ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ် Maybank ချန်ပီယံရှစ်မလေးရှားပြိုင်ပွဲ
သြဂတ်အမျိုးသား၏သင်တန်းအမှတ်စဥ်ခဲ့သည် Rating နဲ့ Slope ခဲ့သည် Rating ဘာတွေလဲ?
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်ကမ်ဘာဦးကပွင့်လင်းဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
KPMG အမျိုးသမီးများနေ့ PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
Regrouping မရှိရင် two-ကိန်းဂဏန်းအပိုဆောင်း
မျိုးစိတ်ကိုယ်ရေးဖိုင်: အ Threadfin Shad
နေမင်းအတွက် Crystal Spike တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
အီတလီကြိယာ conjugation: Cucinare
ဥရောပတိုက်တွင်အထက် Paleolithic ဆိုဒ်များ
မိုးလေမိုးလေဝသ မှစ. အမျိုးမျိုး Is ဘယ်လို
အော်စကာဆုအတွက်မှာက Hip-Hop နဲ့တစ်သမိုင်း
ဂန္ထဝင်စာရေးဆရာ Directory ကို
သင်မည်သို့တစ်တောင် Make နှင့်ချိုးသလား?
ကမျြးစာကို Gossip အကြောင်း Says ကဘာလဲ
အဆုတ်တစ်မော်ဒယ် Make ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါ Norse ဘုရားသခငျသညျ Loki
ထိရောက်စွာ Proofread လုပ်နည်း
သငျသညျက Chris Sharma ကလိုပဲတောင်တက် Make ဒါက5လက်ဆောင်များ
အာကာသယာဉ်မှူး Edgar Mitchell က: "UFOs ရီးရဲလ်ရှိပါတယ်"
အနိမျ့ SAT သို့မဟုတ် ACT ရမှတ်? အဲဒီစမ်းသပ်မှု-Optional ကောလိပ်များထဲက Check